Funda isiKhokelo esi-2 soRhwebo ngo-2021 kuRhwebo lwePenny! -Funda ukuRhweba ngoJanuwari 2022
Funda ngesiKhokelo se-2 soRhwebo ngo-2021 kuthengiso lwePenny Stock!
Izitokhwe zePenny ziinkampani ezinexabiso elingaphantsi kwe- $ 5 ngesabelo ngasinye. Kwithiyori, oku kunokubandakanya inani leefemu ezinkulu ezidweliswe kuthengiso olukhulu lwesitokhwe njenge-NYSE kunye ne-NASDAQ. Nangona kunjalo, inkcazo ebanzi ngakumbi yile yeenkampani ezincinci ezithi zithengise kwiimarike ezingaphezulu kwe-counter (OTC) ezinje ngePink Sheets.
Ukurhweba ngamasheya ePenny kuhlala kuthathwa njengento 'esemngciphekweni omkhulu, umvuzo omkhulu', njengoko ixabiso lesabelo lenkampani linokunyuka okanye lehle ngendlela ephathekayo. Kungenxa yokuba izabelo zeepenny zihlupheka kukungazinzi okuphezulu kunye namanqanaba okuhlawula amatyala asezantsi.
Kwisikhokelo sethu sokuFunda soRhwebo olu-2 kuThengiso lwePenny, sicacisa yonke into ekufuneka uyazi. Oku kubandakanya ukwahlulwa ngokupheleleyo kwezinto ezithengiswayo, ukuba indawo yentengiso isebenza njani, kwaye kufuneka wenze ntoni ukuqala ukurhweba namhlanje!
Yintoni uPenny Stocks?
Ngamafutshane, izitokhwe zeepenny zichazwe yiKhomishini yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano (i-SEC) njengenkampani edwelisiweyo enexabiso lesabelo se- $ 5 okanye ngaphantsi. Ngale ndlela, izitokhwe zeepenny zisebenza kakhulu njengayo nayiphi na enye inkampani kwibala lezorhwebo. Oko kukuthi, umbono ogqubayo kukuthenga isitokhwe se penny ngethemba lokuba iya kunyuka ngexabiso kwixesha elizayo.
Nangona kunjalo, inkcazo efanelekileyo ngakumbi yeenkampani zeepenny ziifemu ezidweliswe kwiimarike ze-OTC ezinje ngePink Sheets. Njengoko sityhila ngeenkcukacha ezithe kratya ezantsi, ukutshintshiselana nge-OTC kunzima kakhulu kubarhwebi abathengisayo ukuba bafikelele, yiyo loo nto kuya kufuneka udlule kumthengisi weqela lesithathu.
Nangona kunjalo, amasheya epenny aneseti yeempawu ezahlulahlula kumashishini emveli eblue-chip. Ngokubalulekileyo, amasheya eepenny ziinkampani ezincinci kakhulu ezinemali encinci yentengiso. Ngenxa yoko, ixabiso lesitokhwe sepenny linokunyuka kwaye lehle kwimfashini yokukhanyisa- nangaphezulu kuneeklasi zee-asethi zokuqikelela ezinje ngee-cryptocurrensets.
Iinkonzo kunye neengozi zePenny Stocks Trading
Ubungakanani obunokubakho obuninzi obuninzi - tyala imali kwinkampani ngaphambi kokuba ibe enkulu
Ithuba lokuthenga inani elikhulu lee-equity ngaphandle kokophula ibhanki
Amandla okwenza ipotifoliyo eyahlukeneyo yesitokhwe sepenisi ukunciphisa umngcipheko
Izitokhwe zePenny lolunye lweeklasi zeasethi ezingazinzanga kwindawo yotyalo-mali
Ukusasazeka kubanzi kakhulu
Unokukufumanisa kunzima ukuthengisa iipesenti zakho zepenny njengamanqanaba okuhlawula amatyala ngomzuzu
Izitokhwe zePenny zihlala zidweliswa kwiimarike ze-OTC- ezenza kube nzima ukufikelela
Amaxabiso anokunyuka aye ezantsi ngeepesenti ezinamanani amathathu ngosuku olunye lokuthengisa
Usebenza njani uPenny Stocks?
Kwithiyori, amasheya eepenny ziinkampani zikawonke-wonke, kangangokuba banakho ukukhulisa imali kubatyali mali bazo zonke iintlobo nobukhulu. Nangona kunjalo, oku kulapho ukufana kuyeka khona. Umzekelo, cinga ngodweliso lwakutshanje lweebhiliyoni ezininzi ze-Uber.
Inkampani yokwabelana ngokukhwela iye yahamba ngenkqubo yesicelo esinzulu kunye ne-SEC, ebandakanya amaziko amakhulu ezemali ukunceda ekunyuseni imali. Ke izitokhwe zidweliswe kweyona stock inkulu ehlabathini - i-NYSE.
Oku kunokuba ngakumbi kwinkqubo efunekayo kwiinkampani zesitokhwe sepenny. Oko kukuthi, ngelixa isitokhwe sepenny sisazakuqhubeka nenkqubo ye-IPO, akukho ndawo ikufutshane nokuqwalaselwa kakhulu ngabalawuli belizwe. Ngapha koko, uninzi lweefeni zesitokhwe esandula ukudweliswa zikhululiwe kubhaliso lwe-SEC!
Ngokubalulekileyo, amasheya eepenny aya kuthi-kodwa ngokuqinisekileyo athengise kwimarike ye-OTC, ngokuchasene notshintshiselwano olukhulu njenge-NYSE okanye i-NASDAQ.
Ukurhweba ngePenny Stock kwiimarike ze-OTC
Nje ukuba inkampani yeepenny isigqibe i-IPO yayo yokuqala, iya kuthi emva koko ifike kwintengiso yesibini. Ngokwimiqathango kaLayman, oku kuthetha ukuba abanini-sitokhwe bangathengisa izabelo zabo kutshintshiselwano, ezinokuthi emva koko zithengwe ngabanye abatyali mali. Njengoko sele kutshiwo apha ngasentla, oku kuya kuba kwimarike ye-OTC.
Yintoni intengiso ye-OTC?
I-over-the-counter, okanye intengiso ye-OTC ngokulula, ivumela abatyali mali ukuba bathengise izixhobo zemali ngaphandle konaniselwano lwesiqhelo. Abona badlali baphambili kweli candelo ziiPink Sheets- ezizezabucala, kunye neBhodi ye-OTC Bulletin.
Zombini ii-arenas zinento enye efanayo - akukho ndawo yokurhweba. Endaweni yoko, ukuthengiselana kwenziwa kumthengisi-kubarhwebi- emva koko kukhokelela kwindawo yotyalo-mali ethe cwaka.
Ngamanye amagama, awuyi kukwazi ukuhlala kwikhompyuter yakho kwaye ujonge ixabiso lesitokhwe sepenny lisonyuka lisihla kwisibini-ngesibini. Endaweni yokuba yonke into yenziwe ngefowuni.
Umzekelo ophambili woku udweliswe apha ngezantsi:
Ufunde malunga nenkampani yeempahla ezizayo neyandula ukudweliswa kwiPink Sheets
Ufumana umthengisi wesitokhwe onokufikelela ngokuthe ngqo kwiiPinki eziPinki, kwaye ubazise ukuba unqwenela ukuthenga izabelo ezixabisa i $ 1,000
Ixesha lokugqibela kuthengiswa izabelo, zithengiswa ngexabiso le- $ 0.10 kwisitokhwe ngasinye
Umrhwebi wenza ezinye iifowuni kwaye afumane omnye umrhwebi ophethe i-penny stocks eyaneleyo yokuhlawula urhwebo
Umrhwebi uyakubiza ukuba akunike ixabiso le- $ 0.15 kwisitokhwe ngasinye - 'nje' ngama-50% aphezulu kunorhwebo lokugqibela
Njengoko ubona kumzekelo ongentla, isitokhwe seepenny sinokuhamba kwinqanaba lokulinganisa - ubuncinci kuba abo babambe izabelo bahlala bekwazi ukuyalela ukuba bathengise ngexabiso elingakanani!
Iimpawu zePenny Stocks
Izitokhwe zePenny zahluke ngokupheleleyo kwiifemu zeblue-chip ezinje ngeApple, IBM kunye neFacebook ngezizathu ezininzi - esizichaza ngokweenkcukacha ezingezantsi.
Okokuqala nokuphambili, iinkampani zesitokhwe se penny zihlala ziifemu ezintsha kraca ezifuna ukunyusa imali. Bahlala bengakwazi ukusebenzisa iitshaneli zesiko ezinje ngeebhanki ezitalatweni eziphakamileyo okanye iifemu ezinkulu zeshishini, yiyo loo nto bejikela kwiimarike ze-OTC.
Ngokukhawuleza, oku kuya kuzisa iintsimbi ze-alamu, njengoko ukunqongophala kokukhetha imali kunokuba ngenxa yempilo yezemali yenkampani- okanye omnye wabalawuli bayo.
Ngokwamashishini, iinkampani zesitokhwe sepenny zinokuvela nakweyiphi na icandelo.
Utywala kubhekiswa kwisixa semali yokuthengisa esisixhobo semali esiqhelekileyo. Kwesinye isiphelo somboniso, iinkampani ezinkulu ezinje ngeFacebook, iAmazon, kunye neBritani yaseMelika yaseMelika zinoxanduva lokurhweba ngokuxabisa yonke imihla. Le yimeko yezibini ze-cryptocurrency ezinje nge-BTC / USD.
Nangona kunjalo, iinkampani zesitokhwe se penny zihlala zihlala kumawaka nje amashumi amawaka eedola kwimisebenzi yezorhwebo yemihla ngemihla, ethi ikhokelele kumanqanaba asezantsi kakhulu okuhlawula amatyala. Oku kubalulekile, kuba oko kuthetha ukuba ungasokola ukukhuphela izabelo zakho wakuba uzithengile.
Into eqhelekileyo kule meko kukuba abathengisi be-newbie baya konwaba kakhulu kukubona ukuba utyalo-mali lweepenny zabo lonyuke ngamanani aphindwe kabini okanye kathathu, kuphela ukuba bashiyeke bedanile xa bengakwazi ukufumana umthengi. Ngenxa yoko, bahlala benyanzelwa ukuba bathengise amasheya eepenny ngexabiso eliphantsi kakhulu kunokuba intengiso inyanzelisa.
Musa ukwenza iphutha malunga nalo, i-penny stocks ixhaphake kakhulu. Kwindawo yotyalo-mali ngokwesiko, iinkampani eziphambili ezidweliswe kwi-NYSE okanye i-NASDAQ zihlala zihamba phezulu okanye ezantsi ngamanqaku eepesenti ezimbalwa ngosuku.
Ngokuchasene noko, amaqonga orhwebo e-penny ahlala ejonga iintshukumo eziphindwe kabini okanye kathathu. Oku kwenza urhwebo lweepenny stock isithuthi esinobungozi kakhulu.
Nokuba yeyiphi iklasi yeasethi oyithengisayo, kuya kuhlala kukho unxibelelwano ngokuthe ngqo phakathi kwempahla kunye nokusasazeka. Umzekelo, iiasethi ezinamanzi kakhulu njenge igolide kunye ne-S & P 500 iya kuxhamla kusasazo oluxineneyo lwamanzi.
Kwi-cryptocurrency space, ngelixa i-Bitcoin izibonelelo ezivela kwiindawo ezinokukhuphisana kakhulu, ii-ERC-20 zemali zichasene ngokupheleleyo. Ngenxa yoko, kunye namaqonga esitokhwe epesenti ahlupheka kumanqanaba asezantsi okuhlawula amatyala, oku kuthetha ukuba ukusasazeka kuhlala kuyinto yeenkwenkwezi.
Ke kutheni le nto ibalulekile?
Ewe, masicinge ukuba uneliso kwistenki esandula ukudweliswa enexabiso lokuthenga i $ 0.22 Nje ukuba uthenge, uya kufumanisa ukuba istokhwe esinye sinexabiso lokuthengisa nge-0.16 yeedola.
Ngokwepesenti, oku kuthetha ukuba ubeke iodolo ku sasaza ye-27.27%! Oku kuthetha ukuba kufuneka wenze okungenani i-27.27% kwiinzuzo kwi-penny yakho yotyalo-mali ukuze nje uphule!
Impompo kunye nendawo yokulahla inkunkuma
Xa une-asethi esekhaya kwimilinganiselo yokuthengisa ephantsi kunye nokuthengiswa kwemali, ukungazinzi okuphezulu, kunye nokusasazeka okubanzi kakhulu-oku kuluncedo kakhulu kwisikimu 'sokumpompa nokulahla'.
Kwabo abangaziyo, impompo kunye nendawo yokulahla inkunkuma iya kubona iqela labadlali ababi bejoyina kunye nokwenza ifuthe lokuthengisa.
Masithi isitokhwe se penny sinemali eyimali eyi-550,000 yeedola.
Iqela labatyali mali liceba ukupompa isitokhwe sepenny
Benza oku ngokutyala imali eninzi kwisitokhwe ngamaxesha achazwe kwangaphambili.
Kananjalo, ixabiso lesitokhwe sepenny liya kukhawuleza ukudubula - kukhokelela kwinto eyaziwa ngokuba yi-FOMO (Uloyiko lokulahleka).
Njengokuba abatyali mali abangakumbi nangakumbi abangaqinisekanga bethatha isigqibo sokuthenga izabelo kwisitokhwe se penny, iqela lokuqala labadlali ababi liya kukhuphela izabelo zabo kwinzuzo enkulu.
Njengoko besenza, ixabiso lesitokhwe sepenny ngokukhawuleza liqala ukwehla- amaxhoba aphulukana nobuninzi botyalo-mali lwabo.
Ngobunzima, kufuneka ulumke kakhulu xa uthengisa i-penny stocks. Ukuba ijongeka intle kakhulu ukuba iyinyani, inokuba kunjalo!
Ulwazi oluNcinci loLuntu
Xa inkampani efana neFord Motors, iDisney, iNike, kunye namawakawaka zidweliswe kuthengiso olukhulu lwesitokhwe, kukho inani elibalulekileyo lolwazi elenziwa lifumaneke kuluntu ngokubanzi. Ngapha koko, akukho semthethweni ukuba iinkampani zixoxe ngeziganeko eziphambili kunye nomntu wesithathu ngaphandle kokwenza ukuba ulwazi ludlulele eluntwini.
Ngokwenza njalo, umtyali mali ngamnye ukwindawo yokudlala elinganayo- njengoko bonke benolwazi lwedatha efanayo. Nantoni na emfutshane kule kwaye inkampani ingena kwindawo 'yokurhweba ngaphakathi'.
Nangona kunjalo-kwimeko yesitokhwe sepenny, akukho lwazi lufumanekayo malunga neenkampani ezidweliswe kutshintshiselwano lwe-OTC. Kungenxa yokuba akukho mfuneko yomthetho yokuba iifemu zihlaziye rhoqo abatyali mali. Ngenxa yoko, abo banolwazi lwangaphakathi kwiimarike ze-OTC bakwisibonelelo esikhethekileyo.
Ayisiyiyo yonke intshabalalo kunye nesithokothoko kwibala lezentengiso. Ngokuchasene noko, inani leenkampani lenze utshintsho ukusuka kwisabelo esincinci se-penny ukuya kwikampani enkulu.
Umzekelo, iplagi yamandla e-hydrogen yamandla yaxabiswa nge-0.15 yeedola umva ngo-2013. Ukukhawuleza ukuya ngoMatshi olandelayo kwaye inkampani yabetha ixabiso le- $ 10.31.
Inkampani yeMonster Beverage libali lempumelelo elikhulu kakhulu. Emuva ngo-1995, izabelo zayo zazixabiswa nge- $ 0.63 nje. Abo baxhasa inkampani kwiintsuku zayo zokuqala baye bavuzwa, njengoko iNkampani yeZiselo eziMnandi ngoku inexabiso elingaphezulu kwe- $ 72 kwi-NYSE. Oku kubonisa ukwanda okungaphezulu kwe-11,600%.
Emva koko unokuthandwa kweeresityu zeBJ, ezinamatyathanga aliqela eMelika. Ngelixa kwakuthengiswa nge-0.88 yeedola nje ngo-1997, sele ibetha ngaphezulu kwama-50 eedola ngesabelo ngasinye. Ifemi sele ibuyile yabuyela ezantsi kwi- $ 20- $ 25 yengingqi, kodwa eli libali lempumelelo nangona kunjalo!
Iingcebiso zokurhweba ngePenny
Intengiso yesitokhwe kaPenny ayisiyonto ekufuneka uyizamile ngaphandle kokuba unokuqonda okuqinisekileyo ngomngcipheko. Unoko engqondweni, apha ngezantsi uza kufumana iingcebiso eziluncedo zokukunceda apha endleleni.
1. Qala ngeeSteki ezincinane
Ukuba uza kubuyela umva kwiinkampani ezincinci, kubalulekile ukuba uqale ngezibonda ezisezantsi kakhulu. Musa ukuhanjiswa kuba ixabiso lesitokhwe liphantsi. Endaweni yoko, kungcono utyale imali kwizongezelelo ezincinci kunokuba utofe isixa esikhulu esikhulu.
2. Phanda kangangoko unako
Njengoko besigqibe ngaphambili kwisikhokelo sethu, iinkampani zesitokhwe sepenny azifuneki ngokusemthethweni ukuba zikhuphe iingxelo zoluntu. Oku kuthetha ukuba kuzakubakho ukuswela okukhulu kolwazi olufumanekayo kuwe.
Ngale nto engqondweni, kuya kufuneka uchithe iiyure ezininzi usebenzisa ulwazi olufumanekayo kwindawo kawonkewonke. Ukuba uziva ngathi awunakho ukuthatha isigqibo esifanelekileyo ngenxa yokunqongophala kwedatha, kuya kufuneka uphephe ukutyala imali kwifemu.
3. Ulwahlulo ngundoqo
Ngaphezulu kotyalo-mali kwizibonda ezincinci, kuya kufuneka ukwahluka kangangoko unako. Umzekelo, masithi uzimisele ukutyala imali eyi-5,000 yeedola kwisitokhwe seepenny. Endaweni yokutyala imali kwifemu enye, ungangcono kakhulu xa uxhasa iinkampani ezingama-50 kwi- $ 100 nganye.
Ngokwenza njalo, awuyi kuva nefuthe lokulahla isitokhwe penny naphina kufutshane kakhulu. Ukuthatha izinto ukuya kwinqanaba elilandelayo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukwahluka kumashishini amaninzi. Umzekelo, cinga malunga neenkampani ezixhasayo ezichaphazelekayo kwioyile kunye negesi, iimpahla, ukutya kunye neziselo, ezemali, ukuthengisa kunye nokunye!
4. Ziphephe iingcali zokurhweba ngePenny
Nangona uninzi lwamacandelo otyalo-mali enengxaki yoko kubizwa ngokuba 'ziingcali', akukho nto ifana ncam naleyo yesitokhwe sepeni. Ngokukodwa, i-intanethi igcwele ngokurhweba ngoochwephesha abakholelwa ukuba banayo 'isosi eyimfihlo' ukukhetha isitokhwe esikhulu sepenny enkulu.
Oku kukodwa kusebenza njengempompo kunye nesikimu sokulahla inkunkuma, njengoko eyona njongo iphambili kukwenza i-FOMO. Oko kukuthi, ukuba loo nto ibizwa ngokuba yingcali inokukholisa abantu aboneleyo ukuba i-penny stock tip yabo iza kuqhuma kungekudala, oku kuyindlela yokwenza ubuqhetseba kwiimarike.
5. Yenza iNkuthalo efanelekileyo kwiBroker yakho
Kukwabalulekile ukwenza inkuthalo efanelekileyo kwi-penny stock broker oyikhethileyo. Emva kwayo yonke loo nto, abathengisi abanokufikelela ngokuthe ngqo kwiimarike ze-OTC baya kuba nolwazi kuluntu olungekhoyo. Oku kubabeka kwinzuzo eyahlukileyo ngaphezulu kuwe njengomtyali mali. Kananjalo, hamba kuphela nomrhwebi ohloniphekileyo onerekhodi ende emileyo kwisithuba.
Iindlela ezizezinye zePenny Stock
Ukuba ungumrhwebi we-newbie, kunokuba kulunge ukuba uphinde ucinge isicwangciso sakho sokuzibandakanya nentengiso yeepenny. Nokuba ngamanqanaba aphezulu okunyanzeleka, ukusasazeka okubanzi, okanye ukunqongophala kwemali - indawo yesitokhwe ayilunganga kubatyali mali abangenamava. Nokuba uyafuna ukuziphosa, uya kufumana kunzima kakhulu ukufikelela kwiPink Sheets kunye neBhodi ye-OTC Bulletin njengomthengisi wentengiso.
Ngale nto engqondweni, kunokuba kufanelekile ukurhweba nge-stock CFDs ngokwesiqhelo. Ungalibali, inkampani isahlelwa njengesixa se penny yi-SEC nokuba idwelisiwe kuthengiso olukhulu lwesitokhwe- ukuba nje inexabiso lesabelo elingaphantsi kwe- $ 5. Ngenxa yoko, abathengisi bezixhobo ze-CFD baya kukunika ukufikelela 'kwizabelo zepenny', kodwa kwindawo elawulwayo.
Ngapha koko, ukuba uthatha isigqibo sokurhweba ngamasheya adweliswe kwiLondon Stock Exchange, uyakufumanisa ukuba uninzi lwezi mveliso zinamaxabiso ezabelo angaphantsi kwe- $ 5. Kungenxa yokuba amaxabiso esitokhwe e-UK abiza izabelo zawo ngeepeni, ngokuchasene neepawundi!
Apha ngezantsi sidwelisa ezinye zeenzuzo zokukhetha isitokhwe seCFD endaweni yokuzama ukuthenga izabelo zepenny kwiimarike ze-OTC.
Abarhwebi beStock CFD kufuneka babenelayisensi yokuthengisa. Thina baFunda ukuRhweba kwe2 sihamba inyathelo elinye ngokucebisa kuphela abathengisi abanelayisensi yimizimba eminye.
Oku kubandakanya ukuthanda izinto ze FCA (EUK), ASIC (Ostreliya), iCySEC (iSipro), kunye neMAS (eSingapore). Phakathi kweemfumba zezinye izinto ezikhuselayo, amabhunga anelayisenisi enye afuna ukuba abathengisi be-CFD bagcine imali yabathengi kwiiakhawunti zebhanki ezahluliweyo.
IiNtengiso ezinkulu nezincinci
Xa usebenzisa umthengisi we-stock CFD, uya kuba nakho ukufikelela kwezona zikhulu (i-US, i-UK, iJapan) kunye nezincinci (i-Australia, Canada, Jamani, njl.). Oko kukuthi, uya kuba nakho ukuthenga okanye ukuthengisa inkampani oyikhethileyo kwidesktop yakho okanye kwisixhobo esiphathwayo.
Oku kwahluke ngokupheleleyo kubarhwebi beentengiso zentengiso, ezifuna ukuba ubeke iiodolo kwifowuni. Ngaphaya koko, akukho nto ngephanyazo kwisitokhwe sepenny, njengoko umrhwebi kuya kufuneka enze ngokweemfuno zakho ngokuthethana nabanye abathengisi!
Ukusasazeka ngokungqongqo kunye neMali ephantsi
Ungasikhumbula sithetha ngobungakanani bokusasazeka xa uthenga kwaye uthengisa isitokhwe se penny kwiimarike ze-OTC. Ekugqibeleni, le yimali yokurhweba ngokuthe ngqo eya kwenza ukuba kube nzima kakhulu ukwenza inzuzo ekuhambeni kwexesha.
Kwimeko yesitokhwe esiqhelekileyo se-CFDs, unokuhlala urhweba iinkampani ze-blue-chip ekusasazeni okungaphantsi kwepayipi enye. Ngaphaya koko, uninzi lweziza zokuthengisa esitokhwe esizicebisa ngazo kweli phepha zikuvumela ukuba uthengise ngaphandle kwekhomishini- ke kukusasazeka okuhlawulayo kuphela!
Xa uthengisa i-penny stock kwi-CFD broker, uya kuxhamla kwidiphozithi engenamthungo kunye nenkqubo yokurhoxa. Uninzi lwamaqonga likuvumela ukuba ubhatale imali kwiakhawunti yakho ngekhadi lemihla ngemihla / ikhadi letyala okanye iakhawunti yebhanki, kwaye ezinye zide zixhase i-e-wallets. Oku kwenza ukuba kube lula kakhulu ukungena nokuphuma kwiakhawunti yakho yorhwebo.
AmaQonga okuShishini ePenny aPhambili 2021
Ke ngoku uyazi i-ins kunye nokuphuma kwendlela penny urhwebo lwesitokhwe iyasebenza, ngoku siza kuxoxa nabanye babathengi bethu abaphambili be-2021. Qaphela, abarhwebi abadweliswe ngezantsi badibana nenkcazo ye-SEC yee-penny stocks-ethetha ukuba badwelisa iinkampani ngexabiso lesabelo elingaphantsi kwe- $ 5.
Ngokusesikweni, zonke izindululo zethu zilawulwa, zixhasa iindlela zokuhlawula ezininzi, kwaye zibonelela ngenkonzo yabathengi ephezulu.
1. I-AVATrade-eQinisekisiweyo yeBroker enokusasazeka okungqongqo
I-AVATrade ngumrhwebi osekiweyo osasaza ngokuqinileyo. Uya kuba nokufikelela kumawaka ee-CFDs-kubandakanya nezo zesheya zezabelo. Iqonga lixhasa i-MT4, emva koko ikuvumela ukuba usebenzise iirobhothi zakho ezizenzekelayo.
I-AVATrade inexabiso eliphantsi lokufaka idiphozithi eyi- $ 100, onokuthi uyiququzelele ngekhadi ledebithi / lekhredithi okanye ucingo lwebhanki. I-AVATrade nayo ilawulwa kakhulu, inelayisensi ezigcinwe kwimimandla emininzi.
Isishwankathelo, ukurhweba ngamasheya kwishishini eligcwele ubuqhetseba. Kuya kufuneka uzibuze ukuba kufanelekile na ukuzama ukutyala imali kwicandelo lezemali elisekhaya kumanqanaba emizuzu yokuhlawula amatyala, ukusasazeka okuxhaphakileyo, kunye nengqondo ejikeleze iWild West. Ngapha koko, nokuba uthatha isigqibo sokuba ungene, uya kufumanisa ukuba akunakwenzeka ukuba ufikelele kwimarike ye-OTC. Endaweni yokuba uyakufuna umthengisi weqela lesithathu.
Kananjalo, sicinga ukuba kufanelekile ukuba siqwalasele ukuthengiswa kwesitokhwe kweCFD yemveli. Oku kuya kukunika ukufikelela kumawakawaka eenkampani ngonqakrazo lweqhosha kulawulo lwendalo. Ngokubalulekileyo, ngekhe uthengise iiasethi ezinokulahla iipesenti ezingama-90 ngexabiso ngosuku olunye - ke umi ethubeni elingcono lokuphumelela kwimizamo yakho yotyalo-mali kwi-Intanethi!
Iyintoni inkcazo yesitokisi sepenny?
Ngokwe-Securities and Exchange Commission (SEC) - isitokhwe sepenny sichazwa njengenkampani edweliswe esidlangalaleni enexabiso lesabelo elingaphantsi kwe- $ 5.
Zeziphi iintengiselwano ezithengiswa kwiivenkile zepenny?
Izitokhwe zePenny ziqhele ukurhweba kwiimarike ezingaphezulu kwekhawuntara ezinje ngeePinki eziPinki kunye neBhodi ye-OTC Bulletin. Olu tshintshiselwano kunzima ukufikelela kulo njengomrhwebi othengisayo, yiyo loo nto kuya kufuneka usebenzise umthengisi weqela lesithathu.
Yintoni ipompo yesitokhwe kunye nepampu yokulahla inkunkuma?
Impompo yesitokhwe sePenny kunye nendawo yokulahla inkunkuma ziya kubona iqela labantu lisebenzisa ubuqhetseba ngokudibanisa ukutyala imali kwinkampani enye. Ngokwenza njalo, kuya kutyhala ixabiso lesitokhwe, nto leyo eya kuthi ikhokelele kubatyali zimali abangalindelanga. Abaphuli-mthetho baya kuthi emva koko bathengise izabelo zabo ngenzuzo enkulu, amaxhoba angalindelanga aphulukane nesitokhwe.
Yeyiphi enye indlela elungileyo esitokisini?
Olunye ulungelelwaniso olugqithisileyo kwisitokhwe seedenari seso sokurhweba ngemfuyo ngokwesiko kwiCFD. Uya kuthengisa iinkampani ezinkulu ngobuso esidlangalaleni kwimeko elawulwa ngokupheleleyo.
Ndiyithengisa njani imali yam yepeni?
Kuhlala kusithiwa ukuthenga iipenny stocks yeyona nto ilula. Kungenxa yokuba unokukufumanisa kunzima ukufumana umthengi xa kuziwa ekothuleni izabelo zakho. Ngokusesikweni, umrhwebi wakho omkhethileyo uya kufuna ukufumana umthengi egameni lakho.